Izithombe ze-Rising Sun ziphinda zisebenzise isithonjana se-Auto racing for "Ford v Ferrari" - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
Ikhaya » Izindaba » Izithombe ze-Rising Sun ziphinda zisebenzise isithonjana se-Auto racing se- "Ford v Ferrari"
Izithombe ze-Rising Sun ziphinda zisebenzise isithonjana se-Auto racing se- "Ford v Ferrari"
I-Studio ikhiqiza inguqulo yangempela yesithombe se-Daytona International Speedway nesixuku saso esijabulisayo esivela kumjaho wama-epic e-1966.
Adelaide, eNingizimu ne-Australia- I-Rising Sun Izithombe zisize ukuphinda izehlakalo ezijabulisa kakhulu emlandweni we-auto racing for Ford v Ferrari, ifilimu entsha evela ku-20th ICentury Fox kanye nomqondisi uJames Mangold. Lesi situdiyo sikhiqize imiphumela yokubonakalayo ye-223 yefilimu, iningi ngokulandelana kwemizuzu engu-8 okubonisa umncintiswano wokuqala we- "24 Hours of Daytona" e-1966. Abaculi bakha umlando onembile ongokomlando, wejubane elaziwayo futhi bawugcwalisa ngabalandeli abajabule.
Enye yamafilimu elindelwe kakhulu kulo nyaka, uFord v Ferrari uphefumulelwe yindaba eyiqiniso yombono wezimoto zaseMelika uCarroll Shelby (Matt Damon) nomshayeli ongazili waseBrithani uKen Miles (uChristian Bale) ohlangane ekulweni nokuphazanyiswa kwenkampani, imithetho ze-physics, namademoni abo siqu okwakha imoto yokugijimisa imoto yeFord Motor Company futhi athathe izimoto ezihamba phambili zomjaho i-Enzo Ferrari kuma-24 Hours of Le Mans eFrance e1966.
Ukusebenza ngaphansi kokuqondisa kukaMangold, umphathi we-VFX u-Olivier Dumont kanye nomkhiqizi we-VFX, uKathy Siegel, i-RSP yanikezwa umsebenzi wokudala izinto ezinkulukazi kanye nesixuku ngokulandelana okwandisiwe ku-Daytona International Speedway. Abaculi basuse imvelaphi kusuka kumdlalo wokukhiqizwa (wadutshulwa e-Auto Club Speedway eCalifornia) babuyisela indawo yabo ngezithombe zedijithali zikagogo ka-Daytona kanye nemvelo yakhona njengoba kubonakale emcimbini wosuku lonke e-1966. Baphinde bagcwala izitezi ngamashumi ezinkulungwane zababukeli bedijithali futhi basebenzisa ezinye izithuthukisi ukusiza ukuphindaphinda ukubukeka nokuqina komjaho wangempela.
"UJames Mangold ubephikelela ekutheni aqhubeke neqiniso emlandweni ngokubheka umjaho nokuthi kwenzeka kanjani ngalolo suku," kuphawula umphathi we-RSP VFX uMalte Sarnes. "Inselelo yethu bekuwukwenza imodeli enembile ngezinga elikhulu futhi siyigcwalise ngabantu ababukeka bethembekile futhi benze izinto ezithile ukuphendula izinto ezenzeka kulo mjaho."
Ukulandelana komjaho bekungelona nje kuphela ukuthi kukhulu futhi kuyadangalisa ubuchwepheshe, kubuye kufika nomnqamulajuqu oqinile. "Sinomlando wokubambisana okuphumelelayo ne-20th Century Fox futhi saziwa ngokuletha ukulandelana okuhlanganisiwe ngesikhathi," kuphawula umakhiqizi we-RSP uGill Howe. “UFord V Ferrari wayehlukile. Njengomlingani wethu wokudala othembekile, njengenjwayelo, siletha umsebenzi osezingeni eliphakeme kakhulu ngokuhambisana nobulukhuni bokubumbana nokungaguquguquki, ngesikhathi sabo esibekiwe. ”
Abadwebi bafunda ifilimu egciniwe yomjaho we- "24 Hours of Daytona" kanye nezithombe zomlando nemidwebo yezakhiwo ukukhiqiza imodeli yendlela yesivinini esikhulu, esivuleke ku-1959. Imininingwane kufaka phakathi ibhokisi lezindaba, izitebhisi, izibonakaliso kanye namafulegi, kuya kumbala wezihlalo, kudalelwe ukulingisa ubuciko bangempela bendawo yomjaho ngalolo suku. "Le movie izobonwa ngabalandeli abaningi bomjaho abafayo," kuphawula umholi we2D uMati Greig. "Uma kukhona okungahambi kahle, ngokuqinisekile bazokuqaphela."
Leli thimba liphinde lenza nezimoto ezi-3D zezimoto ebezihlanganyele kulo mjaho futhi bezisebenzisela ukwengeza izimoto zomjaho emkhakheni wezokukhiqiza. Ngokuphinde futhi bathembele ezithombeni zomlando, abaculi bakhiqiza amamodeli edijithali afana nabalingani babo bangempela bomhlaba, kuze kufike ezinhlotsheni ezihlobise ababekhishwa kuzo, futhi wabahlanganisa baba yizigcawu ngokuhambisana nezikhundla zabo emncintiswaneni wangempela.
Ukunakekelwa okufanayo kwathathwa ukwenza ababukeli bedijithali babukeke futhi baziphathe njengoba isixuku sangempela senza i-60 eminyakeni edlule. Phakathi kokunye, ama-Sarnes athi, izixuku zezixuku zazigcwala ukuze zihambisane namaphethini wesikhathi sabantu (ababekhona emicimbini yomjaho kwakungamadoda amadala eCaucasian). Uthi: “Sifunde ukwakheka kwezixuku nokuziphatha emicimbini emikhulu yamahora e-24. “Ngokuvamile, kunabantu abaningi ezitobhini phakathi nosuku kunasebusuku futhi, lapho kushisa, bavame ukuhlangana ezindaweni ezinomthunzi wezitobha. Abadlali bethu bedijithali balingisa lawo maphethini. ”
Umphathi weCG uDavid Bemi unezela ukuthi ababukeli bedijithali benziwa umuntu ngezinga eliphakeme. Abanye bayabhema. Abanye banamakhamera wesikhathi abadilizelwe entanyeni yabo. Uyaphawula: "Abashayeli bezimpahla benza umsebenzi omuhle kakhulu ngokuqamba izinhlamvu zedijithali ezazilingana nesitayela sesikhathi," uyasho. "Basebenzise izithunzi ukuqiniseka ukuthi izingubo bezingabonakali kahle njengoba abantu babevame ukugqoka ukotini ngaleso sikhathi, kunokuba zenziwe ngezinto zokwakha abantu abazithandayo namuhla."
Izixuku ziphinde zadutshulwa ukuthi ziphendule ezenzakalweni ezilandelwayo, zivele zashaqeka lapho ziseduze nokushayisana futhi zakhala kakhulu ngezikhathi zomdlalo omkhulu. "Njengoba umjaho usondela esiphethweni sawo uya ngokuya uqina futhi lowo muzwa ubonakala esixukwini," kuchaza uCG Supervisor uNoah Deputy CG. "Ekudutshulweni kwethu okukhulu kakhulu, sinama-ejenti we-45,000 akhona futhi alawula ukusebenza kwawo ngemijikelezo ethile ye-30 base. Ukungezelela ukubhekana namaqiniso, ezinye izinhlamvu, ezinjengalezo ezisondelene kakhulu, zithathwa izithombe ngezandla zisuselwa kumpendulo evela kumqondisi. "
Kwathathwa ngokucophelela ukuze kugcinwe izinhlamvu zedijithali zibonakale sengathi zingezona ezokwakha ngokuhamba ngamaphethini abonakalayo. "Sisebenze kanzima ukuqinisekisa ukuthi imvamisa yabalingiswa kanye nezinga lokunyakaza kwabo kuzizwa kungokwemvelo," kusho uVice. “Ngale ndlela yokulandelana, sasifuna izithameli zigxile emjahweni. Isizinda sasidinga ukukholisa futhi sengeze emoyeni ngaphandle kokuphazamiseka endabeni. ”
Abahlanganisi besitudiyo basebenze ukuhlanganisa isithombe sangemuva sedijithali nezinto ezibonakalayo zesenzo bukhoma, ngokwengxenye ngokuhambisana kahle kokukhanyisa nokubala kombala. "Izithombe eziyinhloko zinokubukeka okuhle kwamagilebhisi," kuphawula uGrieg. "Kudutshulwe i-anamorphic futhi inekhwalithi ethambile enama-lens ahlukile we-lens. Izimpahla zedijithali zazidinga ukubukeka okufanayo ukuhlangana komthungo. Kwakudinga umzamo omkhulu ukulungisa lokhu. ”
"Umkhokheli wethu we-Lighting lead, uMathew Mackereth, wethule uhlelo lokwakha amarubhi ethu okukhanya kusetshenziswa i-longitude kanye ne-latitude yendawo yokudubula futhi wakhipha i-timecode kumapuleti. Lokhu kunikeze abakhanyisi bethu isisekelo esiqinile sokuakhela phezu kwabo, ukuvumela ukuthi bagxile ekukhanyiseni okudingekayo ukufeza ukudubula okuqediwe. ”Kuchaza uVice.
I-RSP ihlinzeke ngezinto ezifanayo zangemuva ngokulandelana kwefilimu eseWillow Springs racetrack eMotiveve Desert lapho uShelby noMiles behlola imoto yabo entsha yomjaho. Kulesosimo, izingxenye zesenzo bukhoma zalesi sigameko zidutshulwe kuthrekhi yangempela yeWillow Springs. Noma kunjalo, okuningi ngemuva kwakudingeka kushintshwe noma kufakwe omunye esikhundleni ukuze kususwe izici zesimanje futhi kunxephezelwe izici zekhrekhi eyayishintshile emashumini eminyaka angenelele.
"Umsebenzi wethu bekuwukubeka izixuku endaweni enkulu yemigwaqo futhi sigcwalise abagibeli nezimoto zezikhathi," kusho uGrig. "Lokho kwenziwa ikakhulu ngokuqagela kwe-2 ½-D matte paintings. Ukuqagela kwakumelwe kushintshwe lapho kulandelana njengoba kuthatha amahora amaningi, kusukela ntambama lapho ilanga liphakeme esibhakabhakeni kuze kube ntambama. ”
I-RSP iqede ukulandelana zombili esikhathini esingaphansi kwezinyanga ezintathu. Umkhiqizi we-VFX u-Alexandra Daunt Watney uthi ukufezekisa ukuguqulwa okusheshayo kudinga ukuhlelwa ngokucophelela. Uyakhumbula: “Umphathi wethu we-VFX sakha icebo ngaphambi kokuthi kufakwe izinto zokukhiqiza. “Besifuna ukuqinisekisa ukuthi sinezinto ezibonakalayo nezabasebenzi ezikhona. Siphinde sakhomba isibhamu esinzima kunazo zonke ukuze iqembu lisebenze ngalo bese sabelana nalo lonke umsebenzi emaphaketheni anengqondo. ”
Ukuhlelela ngokucophelela akugcinanga nje ngokugcina iqembu lisemgqeni, kwasenza sikwazi ukuletha imiphumela ekholisayo. "Iminyango yethu ehlukahlukene isebenzisana ngokubambisana ukuze kuqhubeke ukufana," kusho uSarnes. "Lokho kusivumele ukuthi sizilondoloze ngokuguquguquka okukhulu futhi sifake okokufaka okuvela kuJames Mangold nethimba lakhe kuze kube sezingeni lokulethwa kwezidingo. Umphumela uba ukulandelana komjaho onembile ngokomlando futhi othokozisayo ukubukwa. ”
Imininingwane eyengeziwe yeFord v Ferrari:
AbakwaFord v Ferrari-co-izinkanyezi uJon Bernthal, uCaitriona Balfe, uTracy Letts, uJosh Lucas, uNowa Jupe, uRemo Girone noRay McKinnon.
UFord v Ferrari wabhalwa nguJez noJohn-Henry Butterworth noJason Keller. Ikhiqizwe uPeter Chernin pga, uJeno Topping pga noJames Mangold, i-pga
Isitudiyo sethu sijabulela inzuzo yokuba se-Adelaide, eSouth Australia, elinye lamadolobha aphumelela kakhulu emhlabeni. Lokho, kuhlanganiswe nedumela lethu elihle, nokufinyelela kwesinye sezaphulelo ezinkulu kunazo zonke futhi ezinokwethenjelwa, kwenza i-RSP ibe yizibuthe kubenzi befilimu emhlabeni wonke. Lokhu kusicelele ukuthi siqhubeke nempumelelo futhi senze i-RSP yafaka isandla ezinhlelweni ezahlukahlukene kubandakanya iSpider-Man: kude neKhaya, iX-Men: IPhoenix emnyama, uCaptain Marvel, uDumbo, uPredator, iTomb Raider, uPeter Rabbit, iWorld World, iThor. : I-Ragnarok, iLogan, iPan, i-X-Men franchise kanye ne-Game of Thrones.
Umsindo Lounge wethula Isevisi yePodcast - Novemba 25, 2019
Memezela i-Aurora Health Campaign / I-Colonie Ukusakazwa-Abezindaba Komphakathi Ukusakaza-SocialMedia I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor Ama-spears nama-Arrows I-COLONIE / Chicago I-TVU Izinethiwekhi Imiphumela Ebonakalayo	2019-11-25
Ngaphambilini: Uhlaka.io luphakamisa uchungechunge olungu- $ 50M C ukuze iphinde ibuyele ukusebenzisana kwevidiyo
Olandelayo: USam Daley waseDeluxe waseNew York Uletha Ukwehluka Okugqamile ku “Usuku Oluhle Omakhelwane”